Syria: Masoivoho Noroahana Ho Fanoherana Ny Vonomoka Tao Houla · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Mey 2012 3:14 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Dansk, عربي, Italiano, русский, বাংলা, Svenska, Español, English
Ny 26 May, ireo mpanara-mason'ny Firenena Mikambana dia tonga tany Houla no niafarany, ary nanamafy fa 108 no maty, 48 tamin'ireo no ankizy. Nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety taorian'ny fihaonana maika teo amin'ny filankevi-pilaminanan'ny firenana mikambana, nazava ny hafatra fa “herisetra tsy roa aman-tany” no nampiasain'ny fitondrana tamin'ireo sivily, midika izany fa novonoina an-kitsirano ny ankabeazan'ireo maty raha ny marina.
Aostralia no firenena voalohany indrindra nanambara ny fandroahany ny diplaomaty Siriana iray. Avy eo ny Filoha Frantsay François Hollande nanambara ny fandroahana ny masoivoho Siriana tao Frantsa, ary i Alemana, Espana, Grande Bretagne, Italia Bolgaria no hanaraka ny dian'ireo, hatramin'i Etazonia sy Kanada.
Masoivohon'i Syria, Londona. Sary avy amin'ilay mpampiasa Flickr Yersinia (CC BY-NC-SA 2.0).
Avy any Paris, ilay mpanao gazety, Ammar Abd Rabbo, no nanamarika hoe :
@AmmarParis: Faly ny sasany satria voaroaka ireo masoivohon'ny Baas tany amin'ireo firenena Eoropeana… Fa ho faly tena faly aho raha toa izy ireny ka voaroaka hiala an'i ‪#Syria‬ !!!
Issandr El Amrani niteny hoe:
@arabist: Ireny masoivoho Siriana voaroaka hody rehetra ireny dia azo antoka fa mangovingovitra mihitsy misaintsaina izany fodiana izany. Fotoana hisintahan'ny sasany izao!
Shakeeb Al Jabri namaly hoe :
@LeShaque: Tsy afaka hanao izany zareo. Efa nampodiana tamin'ny volana Aogositra ny ankohonan-dry zareo ary atao takalon'aina mba hiantohana ny tsy fivadihany.
Leila any Libanona nilaza hoe :
@LSal92: Sahiko ny miloka fa ireo firenena rehetra nandroaka masoivoho Siriana ireo dia manana masoivoho Israeliana daholo any aminy.
Amani naneho fomba fijery mitovitovy amin'izay :
@Amani_Lebanon: Andrandraiko ny mba handroahana ireo masoivoho Israeliana avy any amin'ny firenen-tsamihafa any amin'ny hoavy, rehefa manao vonomoka any Gaza ry zareo. Izany mihitsy. ‪#Syria
Karl Sharro monina any Londona dia nibitsika hoe :
@KarlreMarks: Ny fandroahana ireo masoivoho Siriana hiala tany amin'ireo Firenena tandrefana dia zavatra tsy misy dikany, poakaty, ataon'ireo governenmanta tsy manana politika mazava momba an'i #Syria
Nivazivazy ihany koa izy:
@KarlreMarks: Dia izao, niditra trano fisotroana ireto masoivoho Siriana telolahy…tsia, tsy izany mantsy e, toerana mpikarakara sidina kay.